Salamo 132 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (Sal 132)
132:1 132:2 132:3 132:4 132:5 132:6 132:7 132:8 132:9 132:10 132:11 132:12 132:13 132:14 132:15 132:16 132:17 132:18
[Vavaka ho an'ny tranon'Andriamanitra sy ny ankohonan'i Davida] Fihirana fiakarana. Jehovah ô, tsarovy Davida Noho ny fiahiany rehetra,[Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga]
Dia ilay nianiana tamin'i Jehovah Sy nivoady tamin'ny Maherin'i Jakoba hoe:
Tsy mba hiditra ao an-daiko aho, Na hiakatra amin'ny farafara fandriako,
Tsy mba havelako hatory ny masoko, Na ho rendrehana ny hodimasoko,
Mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah. Dia fonenana ho an'ny Maherin'i Jakoba.
Indro, nandre azy tany Efrata isika; Nahita azy tao amin'ny saha anaty ala isika.[Na: tany an-tsahan'i Jara]
Aoka hiditra any amin'ny fonenany isika Ka hivavaka eo amin'ny fitoeran-tongony.
Mitsangàna, Jehovah ô, ho amin'ny fitsaharanao, Dia Hianao sy ny fiaran'ny herinao.
Aoka ny mpisoronao hirafy fahamarinana Ary aoka ny olonao masina hihoby.
Noho ny amin'i Davida mpanomponao Dia aza mampiala maina ny tavan'ny voahosotrao.
Jehovah efa nianiana tamin'i Davida, Ary marina izany ka tsy hitsoahany Ny ateraky ny kibonao no hapetrako eo ambonin'ny seza fiandriananao.
Raha hotandreman'ny zanakao ny fanekeko Sy ny teny vavolombeloko izay hampianariko azy, Dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriananao mandrakizay doria kosa ny zanany.
Fa Jehovah efa nifidy an'i Ziona. Ary naniry azy ho fonenany.
Ity, hoy Izy, no fitsaharako mandrakizay doria; Eto no honenako, fa efa niriko ity.
Hotahiko tokoa ny fihinana ao; Hovokisako hanina ny malahelo ao.
Ny mpisorona ao dia hampitafiko famonjena; Ary hihoby tokoa ny olo-masina ao.
Ao no hampitsimohako tandroka ho an'i Davida Sy hanamboarako jiro ho an'ny voahosotro.Ny fahavalony hampitafiko henatra; Fa eo aminy kosa no hamirapiratra ny satro-boninahiny.
Ny fahavalony hampitafiko henatra; Fa eo aminy kosa no hamirapiratra ny satro-boninahiny.
Salamo 1 / Sal 1
Salamo 2 / Sal 2
Salamo 3 / Sal 3
Salamo 4 / Sal 4
Salamo 5 / Sal 5
Salamo 6 / Sal 6
Salamo 7 / Sal 7
Salamo 8 / Sal 8
Salamo 9 / Sal 9
Salamo 10 / Sal 10
Salamo 11 / Sal 11
Salamo 12 / Sal 12
Salamo 13 / Sal 13
Salamo 14 / Sal 14
Salamo 15 / Sal 15
Salamo 16 / Sal 16
Salamo 17 / Sal 17
Salamo 18 / Sal 18
Salamo 19 / Sal 19
Salamo 20 / Sal 20
Salamo 21 / Sal 21
Salamo 22 / Sal 22
Salamo 23 / Sal 23
Salamo 24 / Sal 24
Salamo 25 / Sal 25
Salamo 26 / Sal 26
Salamo 27 / Sal 27
Salamo 28 / Sal 28
Salamo 29 / Sal 29
Salamo 30 / Sal 30
Salamo 31 / Sal 31
Salamo 32 / Sal 32
Salamo 33 / Sal 33
Salamo 34 / Sal 34
Salamo 35 / Sal 35
Salamo 36 / Sal 36
Salamo 37 / Sal 37
Salamo 38 / Sal 38
Salamo 39 / Sal 39
Salamo 40 / Sal 40
Salamo 41 / Sal 41
Salamo 42 / Sal 42
Salamo 43 / Sal 43
Salamo 44 / Sal 44
Salamo 45 / Sal 45
Salamo 46 / Sal 46
Salamo 47 / Sal 47
Salamo 48 / Sal 48
Salamo 49 / Sal 49
Salamo 50 / Sal 50
Salamo 51 / Sal 51
Salamo 52 / Sal 52
Salamo 53 / Sal 53
Salamo 54 / Sal 54
Salamo 55 / Sal 55
Salamo 56 / Sal 56
Salamo 57 / Sal 57
Salamo 58 / Sal 58
Salamo 59 / Sal 59
Salamo 60 / Sal 60
Salamo 61 / Sal 61
Salamo 62 / Sal 62
Salamo 63 / Sal 63
Salamo 64 / Sal 64
Salamo 65 / Sal 65
Salamo 66 / Sal 66
Salamo 67 / Sal 67
Salamo 68 / Sal 68
Salamo 69 / Sal 69
Salamo 70 / Sal 70
Salamo 71 / Sal 71
Salamo 72 / Sal 72
Salamo 73 / Sal 73
Salamo 74 / Sal 74
Salamo 75 / Sal 75
Salamo 76 / Sal 76
Salamo 77 / Sal 77
Salamo 78 / Sal 78
Salamo 79 / Sal 79
Salamo 80 / Sal 80
Salamo 81 / Sal 81
Salamo 82 / Sal 82
Salamo 83 / Sal 83
Salamo 84 / Sal 84
Salamo 85 / Sal 85
Salamo 86 / Sal 86
Salamo 87 / Sal 87
Salamo 88 / Sal 88
Salamo 89 / Sal 89
Salamo 90 / Sal 90
Salamo 91 / Sal 91
Salamo 92 / Sal 92
Salamo 93 / Sal 93
Salamo 94 / Sal 94
Salamo 95 / Sal 95
Salamo 96 / Sal 96
Salamo 97 / Sal 97
Salamo 98 / Sal 98
Salamo 99 / Sal 99
Salamo 100 / Sal 100
Salamo 101 / Sal 101
Salamo 102 / Sal 102
Salamo 103 / Sal 103
Salamo 104 / Sal 104
Salamo 105 / Sal 105
Salamo 106 / Sal 106
Salamo 107 / Sal 107
Salamo 108 / Sal 108
Salamo 109 / Sal 109
Salamo 110 / Sal 110
Salamo 111 / Sal 111
Salamo 112 / Sal 112
Salamo 113 / Sal 113
Salamo 114 / Sal 114
Salamo 115 / Sal 115
Salamo 116 / Sal 116
Salamo 117 / Sal 117
Salamo 118 / Sal 118
Salamo 119 / Sal 119
Salamo 120 / Sal 120
Salamo 121 / Sal 121
Salamo 122 / Sal 122
Salamo 123 / Sal 123
Salamo 124 / Sal 124
Salamo 125 / Sal 125
Salamo 126 / Sal 126
Salamo 127 / Sal 127
Salamo 128 / Sal 128
Salamo 129 / Sal 129
Salamo 130 / Sal 130
Salamo 131 / Sal 131
Salamo 132 / Sal 132
Salamo 133 / Sal 133
Salamo 134 / Sal 134
Salamo 135 / Sal 135
Salamo 136 / Sal 136
Salamo 137 / Sal 137
Salamo 138 / Sal 138
Salamo 139 / Sal 139
Salamo 140 / Sal 140
Salamo 141 / Sal 141
Salamo 142 / Sal 142
Salamo 143 / Sal 143
Salamo 144 / Sal 144
Salamo 145 / Sal 145
Salamo 146 / Sal 146
Salamo 147 / Sal 147
Salamo 148 / Sal 148
Salamo 149 / Sal 149
Salamo 150 / Sal 150